Gabadhyar oo 9 jir ah ayaa waxaa ay Miino kula qaraxday degmada Lughaya ee gobolka Salal. Gabadhan yar oo magaceeda la yidhaahdo Marwa Cabdilaahi Yuusuf ayaa wakhtigii ay miinadu la qaraxday ku sugnayd goob aan ka fogayn gurigooda, sida ay sheegtay Hooyada dhashay Gabadhaasi yar. – Xeernews24
Gabadhyar oo 9 jir ah ayaa waxaa ay Miino kula qaraxday degmada Lughaya ee gobolka Salal. Gabadhan yar oo magaceeda la yidhaahdo Marwa Cabdilaahi Yuusuf ayaa wakhtigii ay miinadu la qaraxday ku sugnayd goob aan ka fogayn gurigooda, sida ay sheegtay Hooyada dhashay Gabadhaasi yar.
16. September 2019 /in VIDEO/AUDIO /von admin
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/09/Gabadh-Yar-oo-9-Jir-Ah-oo-Miino-Kula-Qaraxday-Degmada-Lughaya.png 176 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-09-16 18:43:572019-09-16 18:43:57Gabadhyar oo 9 jir ah ayaa waxaa ay Miino kula qaraxday degmada Lughaya ee gobolka Salal. Gabadhan yar oo magaceeda la yidhaahdo Marwa Cabdilaahi Yuusuf ayaa wakhtigii ay miinadu la qaraxday ku sugnayd goob aan ka fogayn gurigooda, sida ay sheegtay Hooyada dhashay Gabadhaasi yar.
Xuskii Xasuuqii Magaalada Ayshaca iyo Dhaliilaha ka jiray! Tartanka Kubada Cagta Gobolada Ismaamulka Somali State Oo Ka Furmay Magaalada...